अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले ग्रीनल्यान्ड किन्ने कुरा गरेपछि… || सुनौलो नेपाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले ग्रीनल्यान्ड किन्ने कुरा गरेपछि…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रिनल्यान्ड किन्न चाहन्छन्। हुन त यो बिक्रीका लागि छैन तर थियो नै भने पनि साँच्चिकै महंगो हुने थियो।ट्रम्पले आफ्ना सल्लाहकारहरुसँगको ‘डिनर टाइम’ यससम्बन्धी इच्छा व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको भनाइपछि ग्रिनल्यान्डको ‘प्राइस ट्याग’बारे चर्चा चलेको हो।दि वालस्ट्रिट जर्नलको एउटा रिपोर्टअनुसार ग्रिनल्यान्ड विश्वकै ठूलो टापु हो। यदि ट्रम्पको महत्वाकांक्षा साँच्चिकै हो भने यो किन्नुअघि उनले ठूलो पहाड पार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।सुरुमा त यो बिक्रीमै छैन। ग्रिनल्यान्डमा ५६ हजार मानिसको बसोबास रहिआएको छ। यो समथर भूभाग हो।
‘ग्रिनल्यान्ड अमूल्य प्राकृतिक खनिज पदार्थको ठूलो स्रोत हो। यहाँ शुद्ध पानी र आइस, माछा, समुद्री खानेकुरा, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक सम्पत्तिले भरिपूर्ण छ। यो पर्यटकीय यात्राको उच्चतम गन्तव्य हो, हामी व्यवसायका लागि प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई बिक्रीका लागि हैन’, ग्रिनल्यान्डका विदेशमन्त्रीले एक ट्विटमा भनेका छन्।
उनले नै जसरी ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री किम किल्सेनले पनि एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यो बिक्रीका लागि नभएको बरु अरु देशसँग व्यापार र सहकार्यका लागि तयार छौँ, हामी अमेरिकासँग पनि यस प्रकारको सम्बन्ध अघि बढाउन तयार छौँ।’
त्यसो त ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र हो। अमेरिकाको किन्ने धारणा सार्वजनिक भएसँगै कोपनहेगनमा रहेका राजनेताहरुले आलोचना सुरु गरिसकेका छन्। ‘मलाई यो एउटा ठट्टाजस्तै लाग्छ किनभने यो खतरनाक र ग्रोटेस्क विचार हो’, डेनमार्कका विदेश नीति समितिका प्रमुख मार्टिन लिडेगार्डले भने। उनको यो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अस्वाभाविक महत्वाकांक्षाको प्रतिक्रियास्वरुप आएको हो।वर्तमान समयमा एउटा देशले अर्को देश किन्ने विचार राख्नुलाई आश्चर्यजनक रुपमा पनि लिइएको छ।
त्यसो त अमेरिका र डेनमार्कबीच भूकिनबेचको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै रहेको छ। सन् १९१७ मा डेनमार्कले पहिले डेनिस वेस्ट इन्डिजका रुपमा परिचित र हाल यूएस भर्जिन आइल्यान्डका रुपमा चर्चित क्षेत्र अमेरिकालाई बेचेको थियो। यसअर्थमा ट्रम्प कुनै टापु किन्न इच्छा व्यक्त गर्ने पहिला राष्ट्रपति होइनन्।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले सन् १९४६ मा डेनमार्कलाई १० लाख डलरको सुन लिन आग्रह गरेका थिए, जसले महंगीको सामना गर्न डेनमार्कलाई सहयोग पुगेको थियो। आजको दिनमा उक्त रकम भनेको १ अर्ब ३० करोड डलर हुन आउँछ। यद्यपि उनको आग्रह डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो। पछि दुई देशबीच यो विवाद ग्रिनल्यान्डमा सन् १९५० को सुरुतिर सैन्य आधार खडा गर्ने सहमतिमा टुंगिएको थियो। अहिले पनि त्यहाँ थुल एयरबेस रहेको छ।
आजको दिनमा ग्रिनल्यान्ड विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको संकटको छलफलमा सबैभन्दा अगाडि प्रसंगमा आउँछ। त्यस्तै, भूराजनीतिको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ ग्रिनल्यान्ड। आर्कटिक ओसन र नर्थएटलान्टिक ओसनको बीचमा पर्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण भूराजनीतिक स्थानका रुपमा लिइन्छ।
तर यदि बिक्री नै हुन्थ्यो भने यसको मूल्य कति होला? यसबारे अहिलेसम्म कुनै मूल्यांकन सार्वजनिक भएको छैन। तर अमेरिकाले यस्तैखाले टापुहरु खरिदमा पहिले पहिले गरेको खरिद मूल्यलाई आधार भने मान्न सकिन्छ।
सन् १८०३ मा अमेरिकाले फ्रान्ससँग १ करोड ५० लाख डलरमा लुजियाना क्षेत्र खरिद गरेको थियो। जुन महंगीका लागि समायोजन गरिएको थियो। आजको समयमा उक्त रकम ३४ करोड डलर हुन आउँछ। लुजियाना क्षेत्र ८ लाख २७ हजार वर्गमाइल पर्छ। यसको तुलनामा ग्रिनल्यान्ड करिब ८ लाख ३६ हजार वर्गमाइल क्षेत्र रहेको छ।तर सम्झिनुपर्ने अर्को कुरा फ्रान्स त्यतिबेला ग्रेट ब्रिटेनसँग युद्धको तयारीमा थियो र उसलाई पैसाको निकै जरुरत थियो। उसले अमेरिकालाई कम मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। यस खरिदबिक्रीलाई घरजग्गा कारोबारको इतिहासकै ठूलो ‘बार्गेनिङ’का रुपमा समेत लिने गरिन्छ।
सन् १८६७ मा रुसले अमेरिकालाई अलास्का क्षेत्र ७२ लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो। आजको रकममा भन्ने हो भने १२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हो। अलास्का करिब ५ लाख ८६ हजार वर्गमाइल क्षेत्रमा फैलिएको छ। जुन लुजियाना क्षेत्र र ग्रिनल्यान्डभन्दा सानो हो तर यसमा पनि अमेरिकाले ठूलै बार्गेनिङ गरेको बुझ्न सकिन्छ।सन् २०१६ मा ग्रिनल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २ अर्ब ७० करोड डलरको थियो। त्यसकारण ट्रुम्यानको सन् १९४६ को अफर (आजको समयमा एक अर्ब ३० करोड डलर) पनि निकै कम रहेको तर्क गर्न सकिन्छ।
तर ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्न कति तिर्नुपर्ला भन्ने विषय अझै पनि एकीन रुपमा भन्न गाह्रो छ। तर वासिङटन पोष्टका एक विश्लेषकको भनाइमा ग्रिनल्यान्डको मूल्यसूची २० करोड डलरदेखि १७ खर्ब डलरसम्मको बीचमा पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डको भ्रमण गर्दै छन्। यो यात्रामा ग्रिनल्यान्ड खरिदको कुरा हुनेछैन। तर यसबारे चर्चा भने चल्ने नै छ।
आइत, भदौ १, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस